PVC na -agbanwe agbanwe maka ndị na -emepụta ntụtụ - China PVC na -agbanwe agbanwe maka ụlọ nrụpụta & ndị na -ebunye ya
PVC na -agbanwe agbanwe maka ntụtụ
Ogige akpụkpọ ụkwụ
PVC na -agbanwe agbanwe maka ịgbatị
PVC siri ike maka ntụtụ
PVC siri ike maka ịpụ
PVC maka ịfụ
PVC Ca-Zn kwụsie ike
Ihe mkpuchi plastik PVC
PVC mmanu mmanu
Ihe nkwụnye otu ngwugwu PVC
Ndị nkwalite nhazi
Chọta Ngwaahịa Ebe a
Nnukwu ihe nrịba ntụtụ dị larịị maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
INPVC na -enye ọtụtụ 100% ogige PVC na -amaghị nwoke ejiri maka mmepụta Kiddy Children Jelly Shoes. Ngwakọta akpụkpọ ụkwụ anyị nwere nguzogide dị elu, arụmọrụ na nhazi, ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. Anyị na -enye usoro ahaziri iche & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ. Polyvinyl Chloride Compound na-enye Slipper & Sandals gị mgbanwe dị elu & imecha elu dị larịị.
Epeepe PVC Ọhụrụ Eco-friendly Maka ụmụaka Ụmụaka akpụkpọ ụkwụ
INPVC na -enye ọtụtụ 100% ogige PVC na -amaghị nwoke ejiri maka mmepụta Kiddy Children Jelly Shoes. Ngwakọta akpụkpọ ụkwụ anyị nwere nguzogide dị elu, arụmọrụ na nhazi, ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. Anyị na -enye usoro ahaziri iche & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ. Akụ na ụba, polyvinyl chloride (PVC, ma ọ bụ vinyl) kacha mara dị ka ihe plastik nke na-eme ka akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo doo anya, mara mma. Ihe eji eme ihe anyi ...
Ihe mkpuchi PVC doro anya maka akpụkpọ ụkwụ ụmụaka jelii akpụkpọ ụkwụ ụmụaka
INPVC na -enye ọtụtụ 100% ogige PVC na -amaghị nwoke ejiri maka mmepụta Kiddy Children Jelly Shoes. Ngwakọta akpụkpọ ụkwụ anyị nwere nguzogide dị elu, arụmọrụ na nhazi, ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. Anyị na -enye usoro ahaziri iche & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ. Akpụkpọ ụkwụ jelii, nke a na-akpọkarị jellies, bụ nke ejiri PVC mee ya, ọ na-achacha achacha nke na-acha odo odo. Ejiri PVC mee ya kpamkpam, akpụkpọ ụkwụ jelii a nwere de ...
Mgbanwe Polyvinyl chloride Ihe N'ihi ịkwanyere akpụkpọ ụkwụ Ọgwụ
Akpụkpọ ụkwụ PVC a makwaara dị ka akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo ma ọ bụ gumboots, ha bụ akpụkpọ ụkwụ na -enweghị mmiri nke ejiri PVC mee. Akpụkpọ ụkwụ PVC na-adịkarị n'okpuru ikpere ma na-eyikarị ya na apịtị ma ọ bụ mmiri mmiri. Akpụkpọ ụkwụ PVC anaghị echebe naanị ụkwụ ka mmiri ghara ịgwụ ya, ha na -eyikarị maka ọtụtụ ọrụ gụnyere ejiji, ịkụ azụ, ọrụ ugbo, ihe owuwu na ihe ndị ọzọ. ọ nwere agba na-enwu enwu, na-eguzogide corrosion na ...
Ogige PVC maka mmepụta akpụkpọ ụkwụ kọmpat na ụfụfụ
PVC, Polyvinyl Chloride bụ polymer thermoplastic nke a na -ejikarị eme ntụtụ akpụkpọ ụkwụ. A na-eji usoro ịgba ntụtụ eme PVC soles, mana enwere ike ịme ya dị ka mbadamba ụfụfụ micro-cellular PVC nke edepụtara na ịkpụ. Ọ nwere ezigbo mgbatị na nguzogide abrasion na ọnụ ahịa mara mma. Ogwe PVC nwekwara ezigbo mkpuchi na ihe mgbochi. Ha dị ọnụ ahịa ma bụrụkwa nke ọzọ na akpụkpọ anụ. Site n'ịmụ ihe na ahụmịhe nrụpụta na ụlọ ọrụ ihe PVC maka mor ...
PVC granules maka Slipper Uppers V-Straps Injection
Anyị bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ na -agwakọta PVC na China. A haziri ma rụpụta ogige ndị a kpọmkwem iji gboo mkpa nke oge a site n'enyemaka nke igwe ọgbara ọhụrụ dị ugbu a. Anyị na -agba mbọ hụ na anyị tozuru oke mba ụwa ma debe ogo ngwaahịa a na mpaghara ọ bụla nke mmepụta. A na-eji ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi arụpụtara ihe eji emepụta eriri PVC anyị ma ejiri ya mee ihe naanị maka eriri na eriri ...
Ogige PVC na -agbanwe agbanwe maka ntụtụ akpụkpọ ụkwụ Pet
INPVC na -enye 100% ogige PVC na -amaghị nwoke ejiri mee ihe maka imepụta akpụkpọ ụkwụ anụ ụlọ. Akpụkpọ anụ granules PVC anyị nwere nnukwu ihe mgbochi, arụmọrụ na nhazi, ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. Anyị na -enye usoro ahaziri iche & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ. Ihe 100% resin PVC na-amaghị nwoke + ihe mgbakwunye enyi na enyi na-agbasi ike Hardness ShoreA40-50 njupụta 1.18-1.22/cm3 Nhazi Ọgwụ ịkpụzi ...
Ogwe ngwongwo ngwongwo PVC ogige maka akpụkpọ ụkwụ
Ntọala guzosiri ike na 1993, otu INPVC bụ otu n'ime ndị nrụpụta ihe mejupụtara PVC na PVC granules na China. Na INPVC, anyị na-enye ọtụtụ pellets PVC nke enwere ike iji rụpụta akwa akpụkpọ ụkwụ dị elu. Anyị na -enye akụrụngwa plastik akpụkpọ ụkwụ PVC n'ụdị dị iche iche yana usoro pụrụ iche dị ka d ...
Ọgwụ, extrusion na ịkpụzi ịkpụzi
PVC dị nro maka ịpụ
PVC dị nro maka ntụtụ